संसारकै सबैभन्दा छाडा बिबाह (हेर्नुहोस भिडियो सहित) – AB Sansar
संसारकै सबैभन्दा छाडा बिबाह (हेर्नुहोस भिडियो सहित)
October 9, 2020 adminLeaveaComment on संसारकै सबैभन्दा छाडा बिबाह (हेर्नुहोस भिडियो सहित)
काठमाडौं । हरेक मानब जिवनका लागि बिवाह महत्वपूर्ण क्षण हो । यसले नयाँ जीवनको सुरुवात भएको अनुभव गरिन्छ । बिबाहमा खुशी नहुँने सायदै कम हुन्छन् । बच्चादेखि नै हरेक मानिसको सपना जीवन राम्रो ल्याउँने । खुशी जीवन विताउँने । समाजको गन्ने मान्ने हुने भन्ने हुन्छ ।आज हामी यस्ता तस्वीर देखाउँदै छौ । जुन दुनियाँकै सबैभन्दा छाडा बिबाह भनिएको छ । र इन्टरनेटमा सबैभन्दा भाईरल छन् । दुनियाँले सेयर गरेका तस्वीर आखिर कस्ता छन् त यहाँ अपलोड गर्दैछौ ।
फिसोन, टेलर आदि पश्चिमी विद्वानका अनुसार विविध व्यापार र बन्दोबस्तीबाट अकूत सम्पत्ति जम्मा हुन थालेपछि मात्रै एउटा पुरुषले धेरै पत्नी राख्ने चलन विकसित भयो । सम्पत्तिमा दाबी विरोधका किचलो उठ्न थालेपछि मात्रै एउटी पत्नीसँग धार्मिक विवाह गर्ने, सम्पत्तिको हकदार धर्मपत्नीका सन्तानको मात्र हुनेजस्ता नियम थपिन थाल्यो । एजेन्सीको सहयोगमा
थप यो पनि पढ्नुहोस – पनि श्रीमतीलाई खु’सी बनाउने २५ महत्वपूर्ण सुत्रहरू ! हरेक पुरूषले थाह पाउनुपर्ने कुरा !
आफ्नै बाबुले बोकाए १७ बर्षिया छोरीलाई ग’र्भ, ९ महिनासम्म ग’र्भ लुकाएर छोरीले ज’न्माइन छोरा ! : https://absansar.com/?
टीकापुर अस्पतालमा कर्मचारी आवश्यकता ।
राजेन्द्रका बुवाले भने ‘मेरो छोरालाई पनि मा’रि’देउ’